Kutaan kun Bu`uura LibreOffice ibsa.
Faankishinoota I/O argii
Kutaan kun Faankishinoota Sa`atii Darbee qaaqalee naqaa fi bahaa galiinsa itti fayyadamaa waamuuf gargaaru ibsa.
Fankishinii Qabannoo Dogogora
Himootaa fi faankishinii armaan gadii fayyadani LibreOffice Bu'uura dogogora ka'uumasa dabalgochuuf.
ogeejjii yaayaa armaan gadii LibreOfficeBasic n deeggaramu
Ogeejjii Herreegaa armaan gadiiLibreOfficeBu'uuran deeggaramu
faankishinoonni lakkoofsa armaan gadii hediisa dalagu. Herreegni fi ogeejjiin Buuliyaanii kutaa addaatti ibsame.Faankishinoonni Ogeejjii irraa adda, faankishinoonni walii galtee dabarsuu fi bu'aa deebisuu yoo ta'u ogeejjiin immoo bu'aa himannoowwan lakkoofsaa lamaa walitti qabuun deebisa.
Qooyyabootni walmadaallii jiran armaan gaditti ibsamiiru.
Faankishinoonni fi himoonni armaan gadii diraawwan gataa'essee deebisa.
Title is: Faankishinoota Sa`atii Darbee